सल्लाझै आमा सुसाईरहिन् ..बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको शव १० महिनादेखि अस्पतालमै ! | Rajmarga
सल्लाझै आमा सुसाईरहिन् ..बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको शव १० महिनादेखि अस्पतालमै !
काठमाडौ । स्वयम्भुको तल्लो फाँटस्थित डल्लु चौतारानजिकै छिँडीजस्तो डेरामा ३४ बर्षीया सन्तोषी नेपाली भेटिइन ।
उनलाई अरुका घरका धन्दा, होजियारी कम्पनीको ज्यालादारी काम र काखका दुई छोराको हेरविचार गर्नै भ्यानभ्याई छ ।
यहीबीचमा उनलाई बुधबारदेखि फेरि जिल्ला अदालत धाउनु परेको छ ।
छोरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा न्यायका निम्ति भौतारिरहेकी सन्तोषीको सोतोजस्ततो कोठामा कपडा, खानेकुरा, ग्यास, पानी बोटल, जुत्ताचप्पल असरल्ल देखिन्छन् ।
भाईबुहारी, छोरासहित ७ जनाको परिवार त्यही एउटै कोठामा बस्दा रहेछन् ।
१० महिनाअघि जेठ ५ बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १० बर्षीया छोरी अमुताको सम्झानाले उनलाई घरीघरी झस्काईरहन्छ ।
सन्तोषीले छोरीलाई हातखुट्टा खुम्चिएको, झ्यालमा सलको पासो अडकाइएको र घोप्टिएको अवस्थामा ओछ्यान देखिन् । कपाल भुत्ल्याइएको जस्तो देखिन्थ्यो । बेहोस अवस्थामा भेटिएकी छोरीलाई अस्पताल लैजान चौधरी दम्पती र आसपासका छिमेकी गुहारे पनि कोही नआएको उनले बताइन् । त्यसपछि डल्लुमै बस्ने उनकी दिदीसहितको सहयोगमा वीर अस्पताल लगेकी थिइन् । अस्पताल पुर्‍याएर अक्सिजन चढाउने क्रममै डाक्टरले बच्ची अमृतालाई मृत घोषित गरेका रहेछन् । कान्तिपुरमा खबर छ।
Previous post: किन भयो एमाले दुई कित्तामा विभाजित ? अध्यक्ष ओलीको आलोचना
Next post: अब पैतृक सम्पत्तिको हकदार छोरी, के छ कानुनमा ?